Inoyerera, iko kushanda kwevhiki kutibatsira kuzorora | IPhone nhau
Inoyerera, iyo app yevhiki kutibatsira kuzorora
Vhiki rapfuura zvekare, zvinoreva kuti Apple yakamutsiridza kukwidziridzwa kwayo kwemazuva manomwe. Pane ino nguva, iyo app yevhiki iApp inonzi Kuyerera iyo inotarisira kutibatsira kutandara tichiteerera 3D mheremhere yezvakasikwa inoperekedzwa, kana tichida, nemumhanzi wepashure
Pakati pechiitiko chega chega, isu tine 4 mhando dzeruzha dzatinogona kugadzirisa: mimhanzi, ruzha rwemvura pamusoro yakaita sedenga, mvura yerwizi kana gungwa nemhuka. Muchikamu chino, tinokwanisa kukwidza nekudzikisa huwandu hwerimwe rwezwi ruzha kuti tiwane chiyero chakakwana chinotizorodza zvakanyanya. Zvese izvi zvinofambidzana nechakamira chifananidzo chiripo nechinangwa chega chekuratidza chimwe chinhu kana tichigadzirisa manzwi, ndiko kuti, chinhu chakakosha nezvechirongwa ichi hachisi icho chatinoona, asi izvo zvatinonzwa.
Inoyerera, 3D inonzwika kuti tigone kuzorora
Pakazara, iko kunyorera kunosanganisira matanhatu akasiyana mamiriro, asi aya mamiriro ndeaya ekuyerera. Kubva kune imwecheteyo application isu tinokwanisa zvakare kuwana uye kurodha zvimwe zviitiko kubva kune zvimwe zvinoshandiswa senge Wana Mhepo, kunyangwe, zvine musoro, kubhadhara.
Kune rimwe divi, isu zvakare tine sarudzo ye kufambira mberi kana kunonoka nguva. Izvi zvinoshanda kuitira kuti, semuenzaniso, isu tifambise mberi nguva uye titeerere kune iyo nharaunda inonzwika sei husiku kana mambakwedza, kunyangwe ndanga ndichiiyedza uye pachezvangu hazvisi zvekuti ndaona shanduko yakawanda neiyi.
Sezvatinogara tichitaura, kuyerera kunofanirwa kurodha izvozvi zvazviri vakasununguka kwenguva yakati rebei uye, kana tisingazvide, tinozvisunungura, asi isu tatova nazvo zvakabatana neApple ID yedu kana tichizoida mune ramangwana. Neichi chishandiso handichataura kuti ndiri kuenda kuchisiya chakaiswa pane yangu iPhone, ini ndinosarudza kuzorora ndichiita zvimwe zvinhu, asi ini ndatova nazvo zvakabatirwa ramangwana. Uye newe?
Kuyerera ~ Kufungisisa mune zvakasikwavakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Inoyerera, iyo app yevhiki kutibatsira kuzorora
Linkin park inondizorodza zvakanyanya ...
Alto's Adventure, mumwe wemitambo yekutanga kutsigira haptic injini ye iPhone 7
Maitiro ekugadzirisa bhatani repamba reiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus